USA: Sadexdii Wiil Soomaali ee loo heystay inay ISIS ku biiri-lahayeen oo xukun lagu riday – VIDEO | Gaaloos.com
Home » isis » USA: Sadexdii Wiil Soomaali ee loo heystay inay ISIS ku biiri-lahayeen oo xukun lagu riday – VIDEO
USA: Sadexdii Wiil Soomaali ee loo heystay inay ISIS ku biiri-lahayeen oo xukun lagu riday – VIDEO
Sadexdii wiil Soomaalida ahaa ee magaalada Minneapolis Maxkamada lagu soo taagay ayaa lagu helay danbigii lagu soo eedeeyey ee ahaa inay ku biiri lahaayeen kooxda Daacish ee ka dagaalanta Siiriya iyo Ciraaq.
Xeer beegto loo saaray dhageysiga dacwadan ayaa dhamaantood sheegay in danbiga lagu helay sadexda wiil oo kala ah; Guled Cumar, Maxamed Farax iyo Cabdiraxman Da’uud oo ahaa rag saaxiibo ah.
Go’aanka xeer beegtada ayaa kama danbeys ah, waxaana laga sugayaa in Garsooraha Maxkamada uu isagu rido inta uu la ekaan doono ciqaabta ama xabsiga lagu xukumayo wiilashan Soomaaliyeed.
Qoysaska iyo qareenada u doodayey sadexdan wiil ay kasoo horjeestay go’aanka Xeer beegtada ama guddiga Maxkamada u saartay dhageysiga dacwadan, waxayna sheegeen in kooxdaasi xeer beegtada ah ay dhamaantood yihiin dad Cadaan ah oo fikir khaldan ka heysta Soomaalida.
Waxay sidoo kale qareenada u doodaya dhalinyaradan dood xoogan ka keeneen markhaatiga ay xeer illaalinta dowlada Maraykanka u adeegsatay dacwadan oo ahaa wiil Soomaali ah oo ay saaxiibo ahaayeen sadexda wiil ee la xukumay, kaasi oo la sheegay inuu kamid ahaa kooxda dooneysay inay u safarto Siiriya balse heshiis kula galay dowlada Maraykanka inuu ku marag furo sadexda saaxiibadiis ah isagana laga khafiifiyo dacwada.
Sidoo kale dowlada Maraykanka iyo hay’ada danbi baarista Maraykanka ee FBI ayey ehelada dhalinyaradan ku eedeeyeen inay lacag ku bixiyeen sidii dhalinyarada Soomaalida ah loogu dhigi lahaa shirqool iyadoo laamaha amaanka adeegsadaan basaasin Soomaali ah oo ku dhiiri geliya dhalinta inay u baxaan dalalka ay dagaalada ka socdaan kadibna xabsi la dhigo markii la ogaado inay dalka ka baxayaan.
Title: USA: Sadexdii Wiil Soomaali ee loo heystay inay ISIS ku biiri-lahayeen oo xukun lagu riday – VIDEO
Posted by Unknown, Published at 8:41 PM and have 0 comments